७ पदयात्रीका लागि महत्त्वपुर्ण जानकारी
बृहत हिमालय पदमार्ग नेपालको कञ्चनजङगादेखि दार्चुला र हुम्लासम्म फैलिई नेपालका सम्पूर्ण पहाडी जिल्लाहरू छोएको लामो दुरीको पदयात्रा मार्ग हो। यो पैदल मार्गले अन्नपूर्ण, सगरमाथा, डोल्पा, मनास्लु तथा लाङ्टाङजस्ता पदयात्रा क्षेत्रहरूलाई पनि समेटेको छ। यो पूर्ण रूपमा नयाँ होइन, यस पदमार्गमा पुरानो र नयाँ दुवै पदमार्गलाई समायोजन गरिएको छ। केही पुराना रुटलाई समावेश गरिए पनि यसले पदयात्रीलाई छुट्टै र रोमाञ्चक अनुभव प्रदान गर्नेछ।  बृहत हिमालय पदमार्गका पदयात्रीहरु पुन: नेपाल आउन उत्साहित हुन्छन्। धेरै जस्तो पदयात्रा मार्गका बारेमा जानकारी भएपछि समय-समयमा पदयात्रा मार्गका खण्डहरूमा पुन: आउन सक्छन्। यसरी विभिन्न जिल्लाहरूमा पदयात्रा गर्न आउँदा स्थानीय वासिन्दाहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ। 
हिमालय पदयात्राको बारेमा धेरै चर्चा नभएपनि नेपालमा यस किसिमको पदयात्राको सम्भावना निकै उच्च रहेको छ। नेपालको पदयात्राको सुरुवात सन् १९८० मा तोरु नकानोद्वारा लिखित किताब ट्रेकिङ इन नेपाल मा लेखिए अनुसार सिरहाता नामका व्यक्तिले नेपालको पूर्व देखि पश्चिम सम्मको यात्रा तय गरेको भनिएको छ। नेपालमा यस पदयात्राको सुरुवात विभिन्न समयमा विभिन्न मुलुकका नागरिकहरूले तय गरेका छन् जसलाई विभिन्न किताबद्वारा प्रमाणित गरेको छ।
सन् १९८३ मा दुई बेलायती नागरिक रिचार्ड र अडरियनले कञ्चनजङ्गादेखि नागा पर्वत सम्मको दूरि १०० दिनमा पार गरेका थिए। यसैगरि समयको विभिन्न अन्तरालमा नेपालको पहिचानको रूपमा रहेको हिमालहरूले यसको महिमा अझै उच्च बनाएको छ। हिमालय पदयात्रालाई अघि लैजाने क्रममा सन् १९९४ मा दुई फ्रेन्च नागरिक पउल एरिक बोनेउ र ब्रुनो परियोर ले ४२ दिनमा यात्रा तय गरेका थिए र त्यस यात्रालाई `ट्रान्स नेपाल हिमालय’ पनि भनिन्छ। यस यात्राको मार्ग नेपालको पूर्वी क्षेत्र (पशुपतिनगर) देखि पश्चिमी क्षेत्र (महाकाली) सम्म रहेको थियो जसमा सगरमाथा बेस क्याप पनि पर्दछ। बृहत हिमालय पदमार्गको आधिकारिक सुरुवात सन् २००९ मा भएको थियो।
बृहत हिमालय पदमार्ग सुरुवात हुनु भन्दाको ५ वर्ष अघिसम्म यस पदमार्गको बिषयमा खोज, प्रक्षेपण गरी यस पदमार्गको आधिकारिक सुरुवात सन् २००९ मा गरिएको थियो। यस सुरुवात सर्वप्रथम सन् २००८-२००९ मा रबिन बोउस्टेडको समूहले १६२ दिनमा यात्रा तय गरेको थियो। 
बृहत हिमालय पदमार्गलाई पर्यटकीय र भूभागको आधारमा १० वटा भागमा बाँडिएको छ। यसरी १० वटा भागमा विभाजन हुँदा काम गर्न सजिलो हुने र सबै क्षेत्रमा पर्यटन विकास हुन्छ। पूर्वी नेपालको कञ्चनजङ्घा देखि पश्चिमको फारवेष्ट दार्चुला सम्मका यी सम्भावित पर्यटकीय स्थललाई समेटिएको छ। उक्त १० वटा भाग अन्तर्गत कञ्चनजङ्घा क्षेत्र, मकालु–बरुण, एभरेष्ट–रोलवालिङ, हेलम्बु–लाम्टाङ, गणेश हिमाल–मनास्लु, अन्नपूर्ण र मुस्ताङ, डोल्पा, जुम्ला, हुम्ला र फारवेष्ट नेपाल रहेका छन् । सामान्यता २ देखि ३ हप्तामा यो ट्रेलको एउटा भागमा पदयात्रा गर्न सकिन्छ। यी सबै भागहरूमा एक पछि अर्को गर्दै यात्रा गर्न पनि हुन्छ अथवा भाग-भाग गर्दै छुट्टाछुट्टै यात्रा गर्न पनि सकिन्छ।
कञ्चनजङ्घा क्षेत्र नेपालको पूर्वमा पर्छ। यस क्षेत्रमा कञ्चनजङ्घा हिमाल रहेको छ जुन ८५८६ मि अग्लो छ र यो संसारकै तेस्रो अग्लो हिमाल हो। कञ्चनजङ्घा हिमाल नेपाल र सिक्किमको सिमानामा रहेको छ। नेपालको पूर्वी क्षेत्र अन्य क्षेत्र विकसित भए तापनि बृहत हिमालय पदमार्गको पदमार्ग यस क्षेत्रको निकै नै बिकट र दुर्गम ठाउँबाट जान्छ। कञ्चनजङ्घा क्षेत्र साहसिक पदयात्राका लागि महत्त्वपूर्ण गन्त्व्यको रूपमा रहेको छ। प्राकृतिक विविधताले भरिपूर्ण यो क्षेत्र जैविक विविधताको लागि पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ भने उत्तरी क्षेत्र शेर्पा संस्कृतिको महत्त्वपूर्ण गन्तव्य पनि हो। शेर्पा, लिम्बु, राई, र लोहमि जातिको बाहुल्यता रहेको यस क्षेत्रमा अतिथिको स्वागत-संस्कारमा कुनै कमी हुदैंन।
यो क्षेत्रले धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको छ। साथै यो क्षेत्र अद्वितिय भू-प्राकृतिक बनोट,जैविक विविधता भएको उदाहरणीय स्थान हो। यस क्षेत्रमा विश्वमै दुर्लभ हिउं चितुवा र हाब्रेका साथसाथै हिमाली कालो भालु, कस्तुरी मृग, पहरे बाँदर जस्ता संरक्षित एवं संकटापन्न जनावरहरू र कुटकी जटामसी, सुगन्धवाल लौठसल्ला पाँचऔंले तालिसपत्र जस्ता बोटविरुवाहरू संरक्षित छन्। यसको अलावा यहाँ ठिंग्रे सल्लाको मात्र उल्लेखनीय क्षेत्रमा फैलिएको वन, २४ प्रजातिका गुराँस, ४८ प्रजातिका सुनगाभाका साथै कैयौ अमूल्य जडीबुटीहरू पनि पाइन्छ। 
मकालु–बरुण क्षेत्र मकालु हिमालको नामबाट रहेको हो । ८४६३ मि अग्लो यो हिमाल संसारकै पाचौँ अग्लो हिमाल हो। यस क्षेत्रमा पदयात्रा अलि कठिन छ त्यसकारण विदेशी पर्यटकहरु बिरलै यस क्षेत्रमा पदयात्राका लागि जान्छन्। बाटो सानो र अप्ठ्यारो भएकोले पर्यटकहरूलाई पैदलयात्रा गर्न कठिन हुन्छ। नदीहरूमा पुल नभएर पैदल हिँड्न निकै समस्या रहेको छ। प्रस्सत सम्भावना भएर पनि पूर्वाधारको विकास नहुँदा यस मकालु-बरुण क्षेत्रले धेरै पर्यटकहरूको ध्यान तानेर आकर्षक गर्न सकिरहेको छैन। यस क्षेत्रमा निकै पानी पर्छ, हिँउ पर्छ र निकै मनमोहक हिमनदीहरू पनि छन्। यहाँ पदयात्राको लागि जाने उचित समय असोज-कार्तिक हो। यो बेला मौसम राम्रो हुन्छ र पानी पनि निकै नै कम पर्छ।
एभरेष्टलाई नेपालमा सगरमाथा र तिब्बतमा चोमोलुङ्गमा भनिन्छ साथै यो पुरै एभरेष्ट क्षेत्रलाई खुम्बु भनिन्छ। यस खुम्बु क्षेत्रमा संसारकै अग्ला चुचुरा मध्ये ३ वटा रहेका छन्। जसमा सगरमाथा ८८४८ मि. (संसारकै अग्लो), ल्होत्से ८५१६ मि.(संसारकै अग्लो मध्य शिर्ष ४ को) र चोयु ८२०१ मि. (संसारकै अग्लो मध्ये शिर्ष ६ को) पर्दछन्। त्यसका साथै आमा दबलम् (६८१२ मि.)लाई खुम्बु क्षेत्रको गहनाको रूपमा लिईन्छ। सगरमाथा भन्ने बित्तिकै नेपालीहरूको शिर गर्वले उच्च हुन्छ। यसको सुन्दरताले हरेकको मन लोभ्याउँछ त्यसैले सगरमाथालाई संसारका ७ आश्चर्य मध्ये एक को रूपमा लिईन्छ।
हेलम्बु नेपालको उत्तरी भाग अन्तरगत लाङ्गटाङ् क्षेत्रमा पर्दछ्। यस क्षेत्रमा विभिन्न चर्चित हिमालहरु जस्तै लाङ्गटाङ् लिरुङ्ग(७२४६ मि.), गाङ्ग छेन्पो(६३८८ मि.), नयाँ काङ्ग्री(५८४६ मि.), दोर्जे लाक्पा (६९६६ मि.) रहेका छन्। साथै यस क्षेत्रमा पवित्र धर्मस्थल गोसाईंकुण्ड(४००० मि.) पनि रहेको छ। लाङ्गटाङ् राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने हेलम्बु सुन्दर पर्यटकीय गाउँ हो। यो पदयात्राका लागि चर्चित छ। भदौदेखि पुस पहिलो साता हेलम्बु पदयात्राको मुख्य सिजन हो। जाडो सकिएपछि फागुन-जेठसम्म पर्यटकको उपस्थिति बाक्लै रहन्छ।
बृहत हिमालय पदमार्गको मार्ग ५३०८ मि.मा रहेको तिलमान पासबाट लाङ्गटाङ् प्रबेश गर्छ जहाँबाट तिब्बत मज्जाले देख्न सकिन्छ। यहाँबाट विभिन्न हिमनदी, खोलाहरु, मन लोभ्याउने हरिया खेतबारी र चिज कारखाना पनि देखिन्छ। यस हेलम्बु–लाम्टाङको धेरै जस्तो भु-भागमा तामाङ् जातिको बाहुल्यता रहेको भएता पनि शेर्पा र नेवार जातिको पनि उपस्थिति रहेको छ। यो क्षेत्र विभिन्न जातजाति, धर्म, रिति-रिवाज र सम्प्रदायका मानिसको सम्मिस्रणले बनेको छ।
गणेश हिमाल नेपालको नुवाकोट, धादिङ र गोरखा गरी तीनवटा जिल्लामा फैलिएको छ। यो हिमाल नेपाल र तिब्बतबीचको प्राकृतिक सिमाना पनि हो। गणेश हिमाल (७४०६ मि) को नामाकरण हिन्दु देवता गणेशको नाममा गरिएको हो। यसैगरी मनास्लु हिमाल (८१५६ मि) विश्वकै आठौँ उच्च हिमालहरूको सूचीमा पर्दछ र यसको नामाकरण संस्कृतको ‘मनसा’ भन्ने शब्दबाट साभार गरिएको हो। मनास्लु हिमाल सन् १९५६ को मे महिनामा पहिलो पल्ट चढिएको थियो। यस क्षेत्रमा रहेका दुबै हिमालले पर्यटकलाई लालायित गर्ने मनोरम वातावरणको सृजना गर्दछ।
यस क्षेत्रको एउटा मुख्य हेर्नै पर्ने गन्तब्य चुम उपत्यका हो। यस क्षेत्रमा पदयात्राको क्रममा विभिन्न जातजाति, धर्म र सम्प्रदाय झल्काउने संस्कृति हेर्न पाईन्छ। त्यसका साथै पदयात्राको क्रममा धेरै थरिको सालको रूख र जङ्गली जनावरहरूमा लोप हुन लागेका हिम चितुवा र रातो पाण्डा पनि देख्न सकिन्छ।
मुगुको आकर्षणको रूपमा रहेको रारा ताल नेपालकै सबै भन्दा ठुलो ताल हो र यो समुन्द्री सतहबाट २९७२ मिटर उचाइमा रहेको छ। तालको लम्बाई ५ किलोमिटर, चौडाई ३ किलोमिटर र गहिराई १६७ मिटर छ। तालको क्षेत्रफल करिब ११ किलोमिटर छ । रारातालको अर्को एक विशेषता भनेको यस तालमा विश्वमा अन्यत्र कहि पनि नपाइने असला (हिमाली) माछा पाइन्छ। यस क्षेत्रमा विस्तारित रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि रहेको छ जुन १०६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यो निकुञ्ज इ.सं. १९७६ मा स्थापापना गरिएको हो। यो निकुञ्ज १८०० मिटर देखि ४०४८ मिटर सम्मको उचाईमा रहेको छ। यहाँ मनोरम हरियाली दृश्य संगसंगै कस्तुरी, रतुवा जस्ता जन्तुहरू राष्ट्रिय चरा डाँफे र अन्य चरा चुरुङ्गीहरूको समेत अवलोकन गर्ने अवसर मिल्छ। यस क्षेत्रमा औषधी जन्य जडिबुटी र विशेष गरी यार्सागुम्बा पाईन्छ जसको नेपाल लगायत अन्य देशहरूमा एकदमै माग छ।
जुम्लको सिन्जा उपत्यकामा खस (नेपाली) भाषाको उत्पत्ति भएको मानिन्छ। तिला खोलाको किनारमा रहेको यस ठाउँलाई संसारकै धान फल्ने उच्च स्थानको रूपमा पनि चिनिन्छ। यहाँ “काला मर्सि” नाम गरेको रातो धान फल्छ जुन आफ्नो छुट्टै स्वादको लागि प्रसिद्ध छ।  बृहत हिमालय पदमार्ग अन्तरगतको दुईवटै रुट अर्थात माथिल्लो रुट (अप्पर ट्रेल) र तल्लो रुट (लोअर ट्रेल) रारा ताललाई छुन्छन्। यस क्षेत्रको भिन्न रिति-रिवाज, सांस्कृति, वातावरण र मनोरम दृश्यले गर्दा नै यो क्षेत्रको पदयात्रा सधैको लागि मिठो सम्झना रहन्छ।
प्राकृतिक दृष्टिका हिसाबले हुम्ला निकै धनी भएपनि नेपालको विकट ठाउँको रूपमा रहेको यस ठाउँले पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गरिरहेको छ। पदयात्राको क्रममा यस क्षेत्र पनि पर्ने गरेको छ तर भौतिक सुबिधा र विकासको अभावले गर्दा यहाँ बस्नुको साटो पर्यटकहरु यहाँको सिमाना हुदै तिब्बतको कैलाश पर्वत पुग्छन्। यस क्षेत्रका अग्ला हिमालमा माउन्ट अपि (७१३२ मि) र माउन्ट साइपाल (७०३१ मि) रहेक छन्।
हुम्ला विभिन्न जातजाति, धर्म, सम्प्रदायका मानिसको सम्मिस्रणले बनेको छ। यहाँका ५६,००० जनसङ्ख्यामा ८०% प्रतिशत जनसङ्ख्या हिन्दुहरूको रहेको छ भने अरू बौद्ध धर्मावलम्बी, ठकुरी, राजपूतहरूको पनि बाहुल्यता रहेको छ।
यो पदयात्रा मार्ग निमार्ण हुनुमा धेरै कारणहरु छन्। प्रमुख कारण भनेको संसारभरिका पर्यटकहरूलाई नेपालको प्राकृतिक सैन्दर्य अनुभूति गराई नेपालमा पर्यटकहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि गर्नु नै हो। पर्यटकहरूको आगमनले आर्थिक फाइदाका साथै रोजगारी सिर्जना र दुर्गम क्षेत्रको दिगो विकासका लागि पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउने गर्छ र यो पदयात्रा मार्गको निमार्णले विश्वमा नेपालको भौगोलिक र वातावरणीय अवस्थाबारे जानकारी गराउन पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। 
यसका साथै बृहत हिमालय पदमार्ग सबैभन्दा अग्लो हिमाली पदयात्रा मार्ग भएका कारण र संसारका धेरै जसो अग्ला हिमालहरु यही पदयात्रा मार्गबाट देखिने भएका कारण पदयात्रा गर्न इच्छुकहरुका लागि यो आकर्षक छ। यो पदमार्ग अन्तरगत पर्ने गाउँहरूमा विकासको सम्भावना छ। पर्यटकको आगमनले होटल, लजहरु तथा होम स्टेहरु संचालनमा आउँछन्। जसले गर्दा अतिरिक्त आयआर्जनमा वृद्धि हुन्छ र गरिवी निवारणमा सहयोग पुग्छ। साथै धेरैले गाइड (पथप्रदर्शक)को काम पनि गर्छन् जसले गर्दा देशमा रहेको रोजगारीको समस्या थोरै भएपनि कम गर्न सकिन्छ। 
यस पदमार्गमा यात्रीहरूले २ वटा रुट छान्न सक्छन्। बृहत हिमालय पदमार्ग अन्तरगतको माथिल्लो रुट नेपालको हिमाली भेगको माझबाट जान्छ र यसको उच्चत्व ३००० देखि ५००० मिटर बिच रहेकोछ। यस रुटको यात्राको क्रममा मनमोहक हिमालको दृश्य देख्न पाईन्छ। त्यसका साथै बृहत हिमालय पदमार्ग अन्तरगतको तल्लो रुटलाई नेपालको साँस्कृतिक रुटको रूपमा पनि लिईन्छ। यस रुटको यात्राको क्रममा विदेशी पर्यटकहरूले नेपालका मध्य पहाडि भेगका स-साना गाउँ देख्न पाउँछन् साथै त्यस गाउँका रीति-रिवाज र संस्कृति पनि निकै नजिकबाट नियाल्न पाउँछन्।
बृहत हिमालय पदमार्गको माथिल्लो रुटमा पदयात्रा गर्दा निकै नै आनन्द र मनमोहक दृश्य हेर्न पाइन्छ। धेरैको लागि यो पदयात्रा जिन्दगीभरको लागि सम्झन लायक पदयात्रा हुन्छ। यो माथिल्लो रुट नेपालको कन्चनजंगा वेश क्याम्पको दक्षिण भागबाट सुरु भएर नेपाल र टिबेटको सिमामा रहेको हुम्ला जिल्लाको हिल्सामा गएर टुङ्गिन्छ। माथिल्लो रुट १७०० कि.मि दुरीमा फैलिएको छ र यसको उच्चत्व ३००० देखि ५००० मिटर बिच रहेको छ। यो माथिल्लो रुटको पदयात्राको लागि सामान्यता १५० दिन लाग्ने गर्छ।
बृहत हिमालय पदमार्ग अन्तरगतको तल्लो रुटको पदयात्राको क्रममा हाम्रो देशको घना जङ्गल, हरियो खेतबारी, धानका बाली लागेको खेतहरु र साथै हाम्रो देशको रिति-रिवाज, धर्म र सांस्कृतिक पनि देख्न पाइन्छ। नेपालको सांस्कृतिक विभिद्धता झल्काउने गाँउहरूको पनि अवलोकनको अवसर मिल्छ।
पदयात्रीका लागि महत्त्वपुर्ण जानकारी
४.	प्राथमिक उपचारका सामग्रीहरू आफूसँगै राख्न्नुपर्छ , ती सामग्री आपतकालिन अवस्थाका लागि चाहिन सक्छ।
५.	मोबाइल फोन लिई हिडे यात्रामा सजिलो हुन्छ ।
लेक लाग्ने समस्या एक साधारण समस्या हो जुन १०,००० फिट र सो भन्दा बढी उचाईमा लाग्ने गर्दछ । यस समस्या का लक्षणहरूमा टाउको दुख्ने, खान मन नलाग्ने, वान्ता हुने रहेको छ। यस्तो अवस्थामा सकेसम्म आफू भएको उचाई भन्दा तल झर्नुपर्छ । 
यो विकास कार्यक्रमका दुई पक्षहरु छन्। एउटा पक्षले बृहत हिमालय पदमार्ग बारेमा विज्ञापनहरूबाट जनचेतना जगाउने काम गर्दछ। यस्ता पदयात्रा मार्गहरु अमेरिका, क्यानडा र युरोपमा पनि प्रचलित छन्। अर्को पक्ष भनेको आर्थिक रूपमा पिछडिएका नेपालमा निश्चित जिल्लाहरूमा पर्यटनको विकास गर्नु हो।
यसका साथै "द ग्रेट हिमालय ट्रेल विकास कार्यक्रम" ले स्थानीय संस्था र स्थानीय वासिन्दा सँग मिलेर पर्यटनमार्फत् बढि भन्दा बढि फाईदा लिन र पिछडिएका जिल्लाहरूको विकास गर्ने कार्यमा मद्दत गर्छ। साथै "द ग्रेट हिमालय ट्रेल विकास कार्यक्रम" ले स्थानिय संस्थाको मार्फत निजीस्तरका स्थानिय व्यक्तिहरूलाई तालिम दिनको लागि कार्यक्रम आयोजना गर्छ, जस्तै होटल व्यवसाय गर्न, खाना पकाउन वा स्थानीय पथ प्रदर्शक(गाइड), इत्यादि।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=बृहत_हिमालय_पदमार्ग&oldid=1022646" बाट अनुप्रेषित
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक २०:५५, २६ जुन २०२१ मा परिवर्तन गरिएको थियो।